मनोरञ्जन हातमा पैसा टिक्दैन ? यस्ता छन कारणहरु
Nepal Online Patrika: तपाई पैसा नजोगिएर हैरान हुनुभएको होला ? कमाइको र खर्चको तालमेल नमिल्दा समस्या भोग्नेहरु धेरै हुन्छन् ।
केही मान्छेहरू आफ्नो खर्चका लागि क्रेडिट कार्डमा निर्भर हुन्छन् जुन खराब बानी हो । खर्च गर्न क्रेडिट कार्डमाथि निर्भर रहनु भनेको वचत हुन कठिनाइ हुनु हो । क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्नुपरेमा त्यतिमात्र खर्च गर्नुस् जति तपाईंको बैंक एकाउन्टमा पहिल्यैदेखि वचत छ । एक महिनामा जति तिर्न सकिन्छ त्यति मात्र क्रेडिट कार्डबाट खर्च गर्नुपर्छ।